Semalt विशेषज्ञ रेफरल स्प्याम Wrecking गुगल एनालिटिक्स डाटा को नयाँ वेव को बारे मा कुरा
यदि तपाईले अवलोकन गर्नुभयो कि धेरै गुगल ट्राफिकमा रेफरल ट्राफिक आउँदैछ, भने तपाई चिन्तित हुनुपर्दछ किनकि ह्याकरहरूले तपाईको जानकारी र साइटको विवरणहरू चोरी गर्न खोजिरहेका छन्। टेक्नोलोजी विज्ञहरूले हामीलाई धेरै सुझावहरू, युक्तिहरू, र कसरी रेफरल स्प्यामबाट छुटकारा पाउने बारेमा सुझावहरू प्रदान गरेका छन्। तिनीहरूले यसको लड्न धेरै विधिहरू राखेका छन् र तपाईंको विचारका लागि सम्भावित समाधानहरूको सुझाव दिएका छन्।
आजका दिन, रेफरल स्पामको धेरै टुक्राले Google एनालाइटिक्सको डेटालाई हानी पुर्‍याइरहेको छ। यो वेबमास्टरहरू र वेबसाइटहरूका योगदानकर्ताहरूको लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो। आक्रमणहरूले अत्यधिक यातायात रेफरल रिपोर्टहरू रेन्डर गर्दछ र Google एनालिटिक्स सम्पत्तिहरूलाई ठूलो हदसम्म क्षति पुर्‍याउँछ। यो भन्नु गलत हुनेछैन कि यो दुबै साना र ठूला व्यवसाय मालिकहरूको लागि एक मुख्य समस्या हो।
दुर्भाग्यवश, रेफरल स्पामबाट छुटकारा पाउन कुनै उपाय छैन, तर निम्न सुझावहरू, सेर्मल्टको वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक, आर्टम अब्गेनरीले तोकिदिएको , यसको आगमनलाई केही हदसम्म रोक्न सक्छ र हाम्रो वेबसाइटलाई सुरक्षित र सुरक्षित राख्न सक्छ।
आक्रमणकारीहरू गुगल एनालाइटिक्स स्प्याम उत्पन्न गर्दै
यहाँ प्रश्न यो छ कि किन र कसरी आक्रमणकर्ताहरूले Google एनालिटिक्स स्प्याम उत्पन्न गर्छन्? वेबमास्टरहरूका लागि यस प्रश्नको उत्तर खोज्नु त्यति गाह्रो छैन। तिनीहरू आफ्नो गुगल एनालाइटिक्स को विवरण जाँच गर्न सक्छन् र मूल्यांकन गर्न सक्छन् यदि ती साइटहरु नक्कली ट्राफिक प्राप्त गर्दै। यो एक वेबसाइट मालिक को लागी महत्वपूर्ण छ आफ्नो साइट मा जैविक ट्राफिक उत्पन्न गर्न। रेफरल स्प्याम हैकर्स द्वारा अजैविक र नक्कली ट्राफिक उत्पन्न गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यस्ता रेफरल प्रोग्रामहरूको बिक्री र बिक्री कुनै चीजको लागि राम्रो हुँदैन। ह्याकरहरूले केवल यी तरिकाहरू केवल भाइरस, मालवेयर, र उनीहरूको फिशि attacks आक्रमणहरू गर्न फैलाउन प्रयोग गर्दछन्। यसैले, यदि तपाईले अवलोकन गर्नुभयो कि तपाईको साइटले अज्ञात ट्राफिकबाट शicious्कास्पद ट्राफिक प्राप्त गरिरहेको छ भने तपाईले तत्काल आधारमा उपायहरू लिनु पर्छ।
कसरी रेफरल स्प्याम हुन्छ?
अब हामी तपाइँलाई कसरी जाँच्ने छौं रेफरल स्पाम कसरी हुन्छ? धेरै ह्याकरहरूले तपाईंको साइटहरूमा आक्रमण गर्छन् र बोटहरू प्रयोग गरेर तपाईंको डाटा चोरी गर्दछन्। तिनीहरू मध्ये कोहीले बोटनेटको एक किसिमको प्रयोग पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई धोका दिए। केही आक्रमणकारीहरूले नक्कली हिटहरू र भूत हेराइहरू उत्पन्न गर्दछन् अधिक र अधिक वेबमास्टरहरू संलग्न गराउन। यसको लागि, तिनीहरूले तपाईंको साइटमा बट्सहरू पठाए र यसलाई प्रदर्शन गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि तपाईं जैविक ट्राफिक प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्ता आक्रमणकारीहरूले गुगल एनालाइटिक्स ट्र्याकरहरू र जाभा स्क्रिप्टहरू चलाउँदछ तपाईंको सर्वरबाट डाटा स .्कलन गर्न। उनीहरू त्यसपछि यो डेटा जालसाजी गतिविधिहरूका लागि प्रयोग गर्छन्।
हामी तथ्यलाई जान्दछौं कि गुगल एनालिटिक्स वेबसाइटहरु को सुरक्षा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न को लागी बनाइएको एक धेरै भरपर्दो, प्रामाणिक, र राम्रो जानकारी प्राप्त उत्पादनहरु मध्ये एक हो। तपाईं ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको साइटले गुगल एनालिटिक्स र अन्य समान प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्दै कति अनौंठो हेराईहरू छन्। गुगल एनालिटिक्स सक्रिय हुनका लागि कोड तपाईको साइटमा घुसाउनु पर्छ। यो कोड अक्सर ह्याकरहरू द्वारा चोरी गरिन्छ किनकि अनुमान गर्न सजिलो छ र तिनीहरूको अवैध गतिविधिहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो प्रत्येक वेबमास्टरलाई स्पष्ट छ कि गुगल एनालिटिक्सले एक खातामा पचास सम्पत्ति दिन्छ। प्रत्येक सम्पत्तीको यसको विशिष्ट क्रम संख्या हुन्छ। एक वेबमास्टरको रूपमा, यो कर्तव्य यो सीरियल नम्बर कठिन वा अनुमान गर्न असम्भव बनाउनु हो। तपाइँ तपाइँको सेटिंग्स पृष्ठ मा गएर यसलाई बदल्न सक्नुहुन्छ।